Namotsotra ny “mpanao gazetiny nigadra farany” i Ozbekistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2018 9:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, English, Italiano, polski, English
Bobomurod Abdulloev, Ozbeka mpanao gazety. Sary avy amin'ny Radio Ozodlik
Raha nalaza ho isan'ny firenena ahitana mpitondra mpanao tsirefesimandidy malaza indrindra i Ozbekistan, dia efa mizotra mankany amin'ny fiaraha-monina malalaka kokoa izy hatramin'ny nahatongavan'ny filoha vaovao Shavkat Mirziyoyev teo amin'ny fahefana tamin'ny Septambra 2016.
Tamin'ny 7 Mey 2018 ity repoblika sôvietika taloha ao Azia Afovoany ity no namotsotra mpanao gazety roa: Bobomurod Abdulloev sy Hayot Nasriddinov, izay notazonina tamin'ny Septambra sy Oktobra 2017 ho “nanao asa mifanohitra amin'ny lalampanorenana”. Niarahaba ity fihetsiky ny manampahefana Ozbeka ity ny Committee to Protect Journalists [Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety] ary nanambara fa sambany izao tao anatin'ny roapolo taona no tsy nisy mpanao gazety migadra ao Ozbekistan. Nanambara ny fahafinaretany tamin'izao fihetsika izao ihany koa ireo fikambanana iraisampirenena hafa. Nanaramaso manokana sy akaiky an'ity raharaha ity ny firaisamonina iraisampirenena, satria sambany hatramin'ny nahatongavan'ny filoham-pirenena vaovao ao Ozbekistan no nisy mpanao gazety nofonjaina tao amin'ny firenena.
Hatramin'ny nidabohan'ny Firaisambe Sovietika i Ozbekistan no nofehezin'i Islam Karimov mafy mandra-pahafatiny tamin'i Septambra 2016. Nisolo toerana ny lehibeny ilay praiminisitra nanompo an'i Karimov nandritra ny fotoana maharitra, Shavkat Mirziyoyev, nanavao ara-toekarena sy ara-politika ny firenena, ary namelona fanovana tao amin'ny fiarahana ara-paritra. Anisan'ny fanovana politika nataony ny famotsorana ireo gadra politika maro izay efa nigadra ampolony taona maro. Araka ny Komity ho Fiarovana ny Mpanao gazety, mpanao gazety dimy, tsy tafiditra amin'izany ireo roa vao navotsotra tamin'ity herinandro ity, no efa navotsotra tao anatin'ny herintaona sy tapany.
Nandritra izany fanavaozana ara-politika izany no nitazonana an'i Bobomurod Abdulloev sy i Hayot Nasriddinov, samy mpanao gazety, ary tamin'ny fiampangana fampiasan'ny fitondran'i Islam Karimov hanagadrana ireo mpanohitra ara-politika sy mpanao gazety nandritra ny taona maro. Ny fivoahan'ity raharaha ity no te-hampiseho fa efa nanolo-tena hanohy ny fanaozany ny rafitra ny Filoha Mirziyoyev sy fanaovan-dalàna manoka-baravarana na mety ho filalaovana vonjimaika fotsiny ny anjara asan'ny “polisy mahafinaritra” mba hahazoana ny fanohanam-bahoaka amin'ny ady ara-politika ao amin'[ny antokony?].
Nampangaina ho namoaka lahatsoratra miantso ny fanonganana ny fitondrana ao Ozbekistan amin-kerisetra, ao ambadiky ny solon'anarana ireo mpanao gazety notazonina ireo. Niaiky ireo mpanao gazety ireo fa niteraka olana ny lahatsoratra navoakan-dry zareo, saingy nolaviny kosa ny filazana fa miantso ny hanaovana herisetra ry zareo.
Rehefa tafajoboka tao anatin'ny adim-pahefana nifanaovan'i Rustam Inoyatov lehiben'ny fitandroana ny filaminana nanana ny tanjany sy ny filoha Shavkat Mirziyoyev, ireo manamboninahitra misahana ny famotorana tamin'ity raharaha ity, dia maro no nanantena fa ho avotsotra ry Abdulloev sy ry Nasriddinov, mpanao gazety.
Tamin'ny 07 Mey, noafahan'ny fitsarana madiodio tamin'ny fiampangana rehetra i Hayot Nasriddinov, saingy meloka ho nanao “ekstremisma” kosa i Abdullaev, ka voasazy manao asam-panompoana fiarahamonina mandritra ny telo taona. Navotsotry ny mpitsara avy hatrany tao amin'ny efi-pitsarana izy mirahalahy. Minitra vitsivitsy taorian'ny nifohana rivo-pahafahana sy nifamihinana tamin'ny fianakaviana, niantsafa tamin'ny mpanao gazety hafa tao an-toerana i Abdullaev, nilaza hoe: “Ny zavamisy maha-afaka ahy amin'izao fotoana izao, sy ny nanokafana ny fotoam-pitsarana [ho azon'ny rehetra atrehina], dia vokatry ny politika liberalin'ny Filoha Mirziyoyev.”
Tahaka ireo Repoblika Sovietika teo aloha maro i Ozbekistan, ka na dia hetsika ara-politika bitika dia bitika aza dia tsy maintsy mandalo ny fankatoavan'ny mpitondra.
Araka ny fanehoan-kevitr'i Nina Ognianova, mpandrindra ny programan'ny CPJ Eoropa sy Azia Afovoany : “Ankehitriny efa tsy managadra ara-batana ny gazetiny ny firenena, dia tokony hanangana ny fandrosoany hiantoka ny fahafahan'ny fampitam-baovao hanao ny asany mahaleo tena sy tsy misy tahotra ny hofaizina ny manampahefana”.